VeChidiki veMDC-T Vanoti Havasi Kuzoregedza Sarudzo Dzichibirirwa neZanu-PF
VaLovemore Chinoputsa naVaHappymore Chidziva
Boka revechidiki reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai rinoti harisi kuzopeta mawoko aro kana vatsigiri vebato ravo vakaitirwa zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Hutungamiri hweboka revechidiki muMDCT hwakaita musangano neChipiri pamuzinda webato iri paHarvest House muHarare pakabuda nechisungo chekuti bato ravo ridzivirire vatsigiri varo kumhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, mutungamiri weMDCT Youth Assembly, VaHappymore Chidziva vati vachatora matanho akasimbarara kana paine nhengo dzavo dzinenge dzarohwa kana kushungurudzwa nebato riri reZanu PF pamberi pesarudzo.
Munyori muboka iri, VaLovemore Chinoputsa vaudza Studio 7 kuti vatove nevanhu vari munzvimbo dzakawanda munyika yose vari kuongorora kuti ndiani ari kukonzeresa mhirizhonga inonzi iri kuitika kune dzimwe nzvimbo munyika.
Danho ratorwa neboka revechidiki muMDCT iri rinouya mushure mekunge vanhu vanodarika mazana maviri vanonzi vakaurayiwa musarudzo dzemuna 2008 mumhirizhonga yainzi yaive nechekuita nezvematongerwo enyika.
Zvichakadai, VaChidziva, avo vanoti havasi kuzobva panzvimbo dzichange dzichivhoterwa kusvika zvinenge zvabuda musarudzo zvaziviswa, vati sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vanofanira kusiya basa sarudzo dzisati dzaitwa vachiti mawoko avo akatakura mikwende yakawanda.
Hatina kukwanisa kutaura naAmai Makarau kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nharambozha yavo yanga isiri kudairwa.
Mune imwe nyaya, vanowona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reDiaspora Vote, Muzvare Joanna Mamombe, vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvidzoke zvizonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya sezvo ZEC ichiti haikwanise kuti vari kunze kwenyika vavhote vari kunyika dzavari.
Muzvare Joanna Mamombe
ZEC inoti ichatanga kudzidzisa veruzhinji nezvekuvhota munguva iri kutevera. Nekune rimwe rutivi, MDCT inoti icharatidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera nechinangwa chekuti mitemo yose inobata mafambisirwo esarudzo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa.
Zvichakadaro, MDCT yaburitsa mashoko ekukurudzira sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica, reSADC, kuti ritore matanho akasimba ekuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zviri pachena senzira yekuzadzisa zvakatarwa nesangano iri kuti ndizvo zvinofanirwa kuteverwa nenyika dziri muSADC kana dzichiita sarudzo, kana kuti "SADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections."
Nyaya InaThomas Chiripasi